Booliska Somaliland Oo Xalay Qabtay Ninkii Maalmo Ka Hor Hargeysa Ku Dhex Toogtay Marxuun Farmasi Haystay | Berberatoday.com
Booliska Somaliland Oo Xalay Qabtay Ninkii Maalmo Ka Hor Hargeysa Ku Dhex Toogtay Marxuun Farmasi Haystay
Hargeysa(Berberatoday.com)-Ciidanka Booliska Somaliland ayaa xalay gacanta ku dhigay nin loo haysto dilka marxuum uu toddobaadkii hore ku toogtay xaafadda Xero-Awr ee magaalada Hargeysa, kaas oo uu ugu dhex galay kuna dhex dilay meheradiisa oo ahayd farmasii.
Taliyaha Booliska Somaliland sareeye guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan, ayaa xalay wargeyska Geeska Afrika u xaqiijiyay in ciidanka Booliska gobalka Saaxil ay ninkaas gacanta ku soo dhigeen islamarkaana dhawaan sharciga la horkeeni doono. “Ninkaas waanu soo qabanay, gacanta ciidamada Booliska ayaanu ku jiraa, waxaanan ku qabanay deegaanka Berbera.” ayuu yidhi Taliyuhu.
Taliye Fadal, wuxuu u mahadceliyay ciidanka Booliska gobalka Saaxil iyo dad muwaadiniin ah oo
uu sheegay inay gacan ka gaysteen qabashada ninkan, “Waxaan u mahadcelinayaa ciidanka booliska gobalka Saaxil oo masuuliyad iyo dedaal muujiyay, sidoo kale dad muwaadiniin ah ayaan iyagana u mahadcelinayaa oo gacan ka gaystay qabashadiisa